Ekpere Icheta Enyemaka Chineke n'Oge Gara Aga | EKPERE NA OZI
Ekpere iji cheta enyemaka Chineke n'oge gara aga
Za m mgbe m kpọkuru gị, Chineke nke ikpe ziri ezi m! I nyere m aka mgbe m nọ ná nsogbu. Meere m ebere ma nụrụ ekpere m! - Abụ Ọma 4: 1
Enwere ọtụtụ ọnọdụ na ndụ anyị nke nwere ike ime ka anyị nwebiga mmụọ ókè, amaghị ihe na ịtụ ụjọ. Ọ bụrụ na anyị ama ụma họrọ ime mkpebi ndị ziri ezi n’etiti nhọrọ niile siri ike, anyị nwere ike ịchọta nkasi obi ọhụụ na akụkụ Akwụkwọ Nsọ niile.
N'ime onodu obula n'ime ndu anyi, nke oma ma obu nke siri ike, anyi puru ichigharikwute Onyenwe anyi n'ekpere. Ọ dị njikere mgbe niile, dịrị njikere mgbe niile ịnụ ekpere anyị, ma anyị nwere ike ịhụ ya ma ọ bụ na anyị agaghị ahụ ya, ọ na-arụ ọrụ oge niile na ndụ anyị.
Ihe ịtụnanya n’ibikọ ndụ Jizọs na ndụ a bụ na oge ọbụla anyị chigharịkwuuru Ya maka nduzi na amamihe, Ọ n’egosi. Dika anyi n’aga n’ihu na ndu, tukwasi obi na Ya, anyi n’eme ka anyi wulite akuko banyere “okwukwe” na Ya. enyemaka ya na usoro ọ bụla anyị ga - esote.
ibu eziokwu sq
Enwere m mmasị n'ịgụ akụkọ agba ochie nke ụmụ Israel mere ihe ncheta a na-ahụ anya nke oge mgbe Chineke kwagara n'ime ndụ ha.
Israelitesmụ Israel debere nkume iri na abụọ n’etiti Osimiri Jọdan iji chetara onwe ha na ọgbọ ndị ga-abịa n’ọdịnihu na Chineke abịawo ma kwagaara ha (Joshua 12: 4-1).
Abraham kpọrọ ugwu ahu "Onye-nwe-ayi g providenye" ​​n'arutu aka na Chineke nyere ebule dika aja iji dochie anya nwa ya nwoke (Jenesis 22).
Israelitesmụ Israel wuru igbe dịka Chukwu siri chọọ ma tinye n’ime ya mbadamba iwu nke Chukwu nyere Chukwu, tinyekwara mkpara Erọn na ite mana nke Chineke jiri were zụọ ndị mmadụ ọtụtụ afọ. Nke a bụ ihe nnọchianya nke onye ọ bụla hụrụ na-echetara onwe ha ọnụnọ na ndokwa nke Chineke (Ọpụpụ 16:34, Ọnụ Ọgụgụ 17:10).
Jekọb guzobere ebe ịchụàjà nkume wee kpọọ ya Betel, n'ihi na Chineke zutere ya n'ebe ahụ (Jenesis 28: 18-22).
Anyi nwekwara ike idobe ihe ncheta nke ime mmuzo nke okwukwe na Onye-nwe-anyi. Ndị a bụ ụfọdụ ụzọ dị mfe anyị nwere ike isi mee nke a: ọ nwere ike ịbụ ụbọchị na ndetu n'akụkụ amaokwu dị na Baibul anyị, ọ nwere ike ịbụ otu okwute na oge edere n’elu ha n’ubi ahụ. O nwere ike ibu ihe edetu n’elu aja aja site n’inwe ubochi na ihe ndi mere mgbe Chineke putara, ma o bu o nwere ike buru ebe a na-aza ekpere ndi edere n’akuku Baibul gi.
Anyị na-edebe akwụkwọ foto nke ezinụlọ anyị na-eto eto, ka anyị wee nwee ike icheta oge ọma niile. Mgbe m lere anya na akwụkwọ foto ezinụlọ m, achọrọ m inwekwu oge ezinụlọ. Mgbe m cheghachiri azụ n’otú Chineke siri webata ma rụọ ọrụ na ndụ m, okwukwe m na-etolite ma a na m enwe ike ịchọta ume iji gafere oge m ọzọ.
Agbanyeghị na ọ nwere ike ịpụta na ndụ gị, gị onwe gị chọrọ ihe ncheta a na-ahụ anya nke ihe Chineke meworị na ndụ gị. Yabụ mgbe oge ndị ahụ dịka ogologo na mgba ndị siri ike, ị ga-echigharịkwuru ha ma nweta ume site n’akụkọ ihe mere eme gị na Chineke ka ị nwee ike ịme usoro ọzọ gị. O nweghị oge ọ bụla Chukwu anọnyereghị gị. Ka anyị cheta otu o siri mee ka obi ruo anyị ala mgbe anyị nọ na nsogbu ma jiri okwukwe na-ejegharị n’okwukwe n’amara na ọ ga-anụkwa ekpere anyị ọzọ.
'Ve dịrị m mma n’oge gara aga. Have nụla ekpere m, ị hụwo anya mmiri m. Mgbe m kpọrọ gị n’oge m nọ na nsogbu, ị zara m. Ugboro ugboro ị gosipụtara na ị bụ eziokwu, dị ike. Onyenweanyị, taa a bịakwutere m gị ọzọ. Ibu m dikwa ibu ma achoro m ka i nyere m aka imeri nsogbu ohuru a. Meere m amara, Onyenwe anyị. Kop akam mi. Biko, garuo n’ọnọdụ m siri ike taa. Biko megharia n’ime obi m ka m too gi n’oge udu mmiri a.
N'aha gị ka m na-ekpe ekpere, Amen.
Nke gara aga Post Gara aga post:Whonye ka m ga-ekpe ikpe? Pope Francis kọwara echiche ya
Next Post → Post ozo:Cyber ​​ọkachamara ọkachamara na-agba ndị Vatican ume ka nchekwa Internetntanetị